Jiri ụgbọ mmiri gaa New York si Europe | Akụkọ Njem
new york usa | | Nduzi
Marygbọ mmiri Queen Mary 2 na-eru New York
Chetụdị n'echiche iji ụgbọ mmiri rute New York? Ọ ga-eju anya. Echere m ogologo njem m ga-eme n'oké ụgbọ mmiri gafere North Atlantic. Da ịhụnanya? Onyinyo Titanic na-ekpuchi echiche a ma ọ bụ na ọtụtụ ndị njem na-achọ ụdị njem ndị ọzọ na-enweghị oke oyi na oyi.
Emehiela, ọsọ na ego na-achịkwa mkpebi. Site na Europe, ị nwere ike ịbanye na New York n'otu ụbọchị maka tiketi na-adịkarị ala karịa 500 euro. Na ụgbọ mmiri? Nwere ike iji ụgbọ njem si Europe gaa New York N'ezie ee. Anyị nwere nhọrọ abụọ: ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri ndị ahịa.
Companylọ ọrụ mbupu Nri Cunard Ọ na-agafe Atlantic kemgbe mmalite nke narị afọ XNUMX. Maka ụzọ jikọtara Southampton na New York ha nwere transatlantic Nwanyị Mary 2, otu ụgbọ mmiri emere na 2003 nke na-azọrọ na ọ bụ nke kachasị ukwuu, nke kachasị okomoko ma dị oke ọnụ nke emere na akụkọ ihe mere eme.
Dika inwere ike ikwusi, njem njem a rue New York abughi onu ahia. Ahịa dị n'etiti euro 1.500 na 10.000 n'ụzọ ọ bụla, nke na-adịkarị n'etiti ụbọchị asatọ na ụbọchị iri na ise. N’ezie, o nwere ntụsara ahụ niile ị ga-eche n’echiche.
Maka ndị na-enweghị mmasị n'okwu njem ahụ wee tụlee ọnụahịa ndị ahụ gabigara oke, ịnwere ike ịnwale nhọrọ dịtụ ntakịrị: gaa njem n'ụgbọ mmiri ahịa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ mba dị iche iche na-ekwe ka ịbanye na ndị njem ma ọ bụrụhaala na ha akwụ ụgwọ achọrọ. Dịka onye njem, a na-etinye gị n'ime ụlọ ndị ọbịa ma ị nwere ohere ịnweta ọtụtụ ebe ụgbọ mmiri ahụ.
Ọnụahịa n'ụgbọ mmiri ndị a dị ntakịrị karịa ụgbọ mmiri. Ga njem dị ka onye njem nwere ike isi na euro iri isii ruo iri itoolu n’ụbọchị, tinyere ihe niile.
Ntanetị juputara na ibe na blọọgụ nke ndị mmadụ na-ekwupụta ahụmịhe ha n'ụgbọ mmiri ndị ahịa. Maka ndị njem ahụ na-atụ ụjọ karị, yana iji ego echekwa, ọ nwere ike bụrụ nhọrọ na-atọ ụtọ karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Jiri ụgbọ mmiri si New York si Europe pụọ
Oscar Wilde si Tomb na Paris